यी हुन् बलिउडका सर्वाधिक विद्युत् बिल बुझाउने ७ स्टार, सबैभन्दा अगाडी को ? - Everest Dainik - News from Nepal
यी हुन् बलिउडका सर्वाधिक विद्युत् बिल बुझाउने ७ स्टार, सबैभन्दा अगाडी को ?
विद्युत् जनताका लागि आधारभूत आवश्यकता भइसकेको छ । अहिले विद्युत् छैन त विभिन्न काम गर्न मुस्कील पर्छ । झनै शहरमा विद्युत्को माग बढि छ । अहिलेको समयमा एक घण्टा पनि लोडसेडिङ भयो भने ग्राहक धर्ना बस्न पछि पर्दैनन् ।
त्यसकारण विद्युत् मानिसका लागि अत्यन्त जरुरी चिज बनेको छ । अहिले जति विद्युत्को उपयोग गर्छौ त्यहि अनुसार बील पनि बढि आउँने गरेको छ । यसैबीच आज हामी बलिउडका चर्चित स्टार ७ स्टारले मासिक विद्युत्को बील कति तिर्छन् भन्ने जानकारी गराउने छौं । हेरौं सबैभन्दा बढि कुन स्टारले विद्युत्को बिल बुझाउँछन्ः
सर्वाधिक विद्युत् बिल बुझाउने बलिउड सात स्टार मध्ये कट्रीना कैफ सबैभन्दा कम बिद्युत् बील तिर्नेमा पर्छिन् । उनी मुम्बइ स्थित घरको महिनामा १० लाख भारतीय रुपैयाँ बिद्युत् बील बुझाउँछिन् ।
दीपिका पादुकोण कट्रीनापछि विद्युत्को बील तिर्नेमा पर्छिन् । उनले महिनामा १३ लाख भारु बीजुलीको बील बुझाउँछिन् ।
चर्चित बलिउड स्टार आमिर खानले मुम्बइ स्थित घरको मासिक २२ लाख भारु बीजुलीको बील बुझाउँछन् ।
सदाबहार महानायक अमिताभ बच्चनले पनि आमिरकै जति २२ लाख भारु मासिक विद्युत बील बुझाउँछन् ।
यो मामलामा सलमान खान छुट्ने कुरै भएन । बलिउडका दबंग खान क्गालेक्सी अपार्टमेन्टमा महिनाको २३ लाख भारु रुपैयाँ बत्तिको बील मात्रै तिर्छन् ।
यस्तै, अर्का स्टार सैफअली खान आफू बस्ने घरको ३० लाख भारु महिनाको बिद्युत् बिल बुझाउँ छन् ।
अन्तिम १० नम्बरमा आउँछन् । बलिउडका स्टार शाहरुख खानको नाम । शाहरुखले महिनामा कति बुझाउँलान् विद्युत् बिल ? तपाईले कल्पना पनि गर्नु भएको थिएन होला । तर शाहरुखले भने तपाईको कल्पना बाहिरको भन्दा बढि विद्युत् बील तिर्छन् । उनले महिनामा ४३ लाख भारु विद्युत् बील बुझाउँछन् । -एजेन्सी
ट्याग्स:7Star, amir khan, Amitabha Bachan, Dipika Padrukorn, katrina kaif, sahrukh khan, Saifali khan, Salman khan